वान्डा नारा नग्न चित्र र लीक पोर्न सेक्स टेप भिडियो - सेलिब्रेटी अश्लील
ब्रुक डी ओर्से
वान्डा नारा नग्न चित्र र लीक पोर्न सेक्स टेप भिडियो
मोडल र स्लट वान्ड नारा नग्न जाँच लीक फोटोहरू र निजी स्पष्ट सेक्स टेप अश्लील भिडियो जाँच गर्नुहोस् जहाँ वान्डा आईकार्डि उनको पूर्व लोपेजलाई ब्लाउज दिँदैछ।
वान्डा नारा (उमेर) 33) एक अर्जेन्टिनी मिडिया व्यक्तित्व, फुटबल एजेन्ट, showgirl, टेलिभिजन प्रस्तुतकर्ता, र मोडेल हो। उनले विवाह गरे मउरो इकार्डी , उनको ग्राहकर एक पेशेवर फुटबलर २०१ 2014 मा। नाराले २०० 2008 देखि २०१ from सम्म फुटबलर मैक्सी लोपेजसँग विवाह गरेकी थिइन। लोपेजले नरालाई धोखा दिएको आरोप लगाएपछि उनीहरूसँग सम्बन्ध विच्छेद भयो, तर उनले लुपेजलाई बारम्बार वैवाहिक अवफादारीको आरोप लगाए। अर्जेन्टिनी मजिस्ट्रेट्सले लोपेजको पक्षमा फैसला सुनाए र उनलाई उनको गृह शासनको बिरूद्ध उत्पीडनको आरोपबाट हल गरे। लोपेज र नाराका तीन छोराहरू छन्।
नारा र उनका छोराहरू इटालीबाट ब्युनोस आयर्समा फर्के। त्यसपछि उनी फुटबलर माउरो Icardi संग सम्बन्ध शुरू गरे। नाराले उनलाई चिनेका थिए इकार्डीको लोपेजसँगको मित्रता, अप्रिल २०१ 2014 स्याम्प्डोरिया र इन्टरको बीचको सेरी ए खेल पछि। लोपेजले इकार्डीको हात मिलाउन इन्कार गरे, जसले प्रेसलाई 'वान्डा डर्बी' डब गर्न अग्रसर गरायो। नारा र इकार्डीले २ May मे २०१ 2014 मा विवाह गरे, नपेकी नापाबाट सम्बन्धविच्छेदको धेरै समय पछि। नारा र ईकर्दीका दुई छोरी छन्।
वान्डा नारा सेक्स टेप लीक
कस्तो एक देवी देवी! वान्डा नारा आईकार्डि अश्लील भिडियो यहाँ छ, अज्ञात स्रोत द्वारा अनलाइन जारी गरियो! यो उत्तम केटीसँग ठूलो स्तनहरू छन् र तिनीहरूलाई देखाउन मन पराउँछन्। तर यहाँ उनी आफ्नो पूर्व पति सम्पादोरियाको फुटबल प्लेयर लोपेजको मुर्गा चूसिरहेकी छिन्। उसको डिक वान्डाले मनपराएको जस्तो ठूलो छैन, तर मान्छेसँग यति धेरै पैसा भएको खण्डमा यो उनको लागि पर्याप्त छ। उनी ना naked्गै स्तनहरू उछालिरहेको देखाउँछिन् जबकि मुर्ख उनको मुख भित्र छ। उनीले यो चाटिन् र गरीरहेकी छिन् जबकि मानिस चुदाईको रूपमा सि .्गाई छ।
वान्डा नारा नग्न फोटो
र चुहावट गरिएको सेक्स टेपको कारण जुन सबै इन्टरनेटमा बाढी आयो, हामी उनको सर्वश्रेष्ठ टॉपलेस, नग्न र सेक्सी छविहरू तैयार गर्थ्यौं। उनी तातो छिन, ठूला प्राकृतिक स्तनहरू छन्, यति ठूलो आकारको गधा र चूसने डिक डकको अनुहार होइन! वान्डा नाराले हालसालै एउटा स्तब्धताका साथ स्वीकार गरेको छ कि PSG स्ट्राइकर र पतिले उनको पक्ष हराएमा उनीसँग यौन सम्बन्ध राख्छन्। ठीक छ, यो समयको कुरा हो नाराले पनि उसलाई धोखा दिनेछ, र केहि अन्य फुटबल खेलाडीलाइ चुक्न सक्छ। उनीहरुको लागी उनीहरुलाई केहि विशेष बुत छ ...
वान्डा, कमेन्टकर्ता को नासमझ साथी जाँच गर्नुहोस् Charissa Thompson, जसको nયુडहरू र अश्लील लीक हामी संग छ!
इलेना सोफिया रिक्की
hayley williams नग्न फोटो
analeigh tipton नग्न pics
जीवन युद्ध नग्न चित्रहरु